अशोककुमार शिवा, काठमाण्डौं
श्रावण महिनाको पहिलो हप्ताको एकदिन विहानै भैरेकी सासुआमा अन्य दुईजनालाई साथमा लिएर भैरेको घरमा आईन् ।
भैरेकी पत्नी भान्सामा ल¥याङ्गत¥याङ्ग गर्दै थिईन । भैरे आफ्नो कोठामा टेलिभिजन हेरेर बसिरहेको थियो । सासु लगायत अन्य दुईजना सिधै भान्सा तिरै हानिए । भान्सामा करिब आधा घण्टाको भलाकुसारी पछि भैरेकी पत्नीले भैरे नजिकै आएर हामीले कुराकानी गरिसक्यौं अब तपाईको पालो भनेर भैरेलाई भान्सामा बोलाईन् । भैरे भान्सामा गएर सासुलाई प्रणाम गरिवरी संगैको कुर्सिमा बस्यो । ‘ज्वाईं, यो तिम्रो साली अनि त्यो चाहीं उस्को छोरा, उस्लाई समस्या परेछ छोरालाई बाहिर पठाउन सहयोग गर्नुप¥यो रे लौ’ भैरेकी सासुले एकसासमा भनिसकिन ।
भैरेले यसो उनीहरु तिर नियाल्यो । उस्लाई लाग्यो कि यिनी आफ्नै सासुको आफन्त हुन सहयोग गर्दिन भन्दा सासुले नराम्रो सोच्छिन । उस्ले के कसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो ? के को लागि आवस्यकता परेको हो ? भनेर सोध्यो । ति महिलाले फटाफट आफ्नो समस्या बताईन, छोरोको केहिदिन भित्रैमा दुवई जानुपर्ने छ र त्यस्को लागि टिकट समेत भैसकेको तर रकमको अभावले अलमल परिरहेको व्यथा सुनाईन् । भैरेको मन मोम पग्लिएझै पग्लिएर आयो । हो यस्तो समस्या पर्नु भनेको दुखद कुरा हो ठिकै छ कति चाहिएको हो त भनेर सोध्यो । महिलाले सात लाख चाहियो भिनाजु भनिन् । भैरे सालीले मिठो गरी भेनाजु भनेकोमा मख्ख पर्दै ल हुन्छ सहयोग गरुँला तर दुई दिन पछिमात्र रुपैयाँ हुन्छ भनेर फ्याट्ट भनिहाल्यो । सहयोग गर्ने बाचा सकेर कुराकानीको क्रममा कता तिरबाट की साली हुन भनेर सोध्दा त आफ्नै साली नभई नाता जोडेर साली हुन आईपुगेकी पो रहिछन् भैरे नौ तला माथिबाट झरेर भुईंमा बजारिए सरह घायल भयो । पत्नीतिर आँखा तरेर हेर्दै, ए त्यस्तो पो म त आफ्नै भित्र कै नाताकी साली पो भन्ठानेको भैरेले मन कुड्याउदै भन्यो ।
सहयोग गर्ने बाचा त गरिसकेकै थियो भैरेले सोही अनुरुप दुई दिन पछि एकजना लेखन्दासलाई बोलाएर तमसुक लेख्न लगाएर मन अमिलो बनाउँदै चेकमा हस्ताक्षर गरेर सुम्पियो । पैसा पाएकोमा खुसि हुदै ‘धन्यवाद भिनाजु हजुरको यो मलाई ठूलो गुण लाग्यो म तोकिएको समयमा तुरुन्तै ल्याउछु’ भनेर आमाछोरा निस्किए । केहि घण्टा पछि भैरेको मोबाईलमा एउटा म्यासेज आयो Your account debited by ………….. ।
एक दिन दुई दिन हुदै तोकिएको समय सिमा सकियो तर सालीको कुनै अत्तोपत्तो थिएन । सुरुसुरुमा फोन गर्दा कुराकानी हुदै थियो तर अलिक पछिबाट त फोन गर्दा पनि उठाउन कस्ट गरिनन् । यस्तै हो मानिसलाई दिउला मात्रै भन्नुपर्छ खुरुन्दार गर्छन, तर जब लिन्छन तब दिने व्यक्तिको अश्रुधारा बगाउँछन् । विचरो भैरे, हतारोमा नाता अनुमोदनले धोका खायो ।